လွယ်ကူသောနောက်ဆုံးမိနစ်ဟယ်လိုဝင်းဝတ်စုံအကြံဥာဏ်များကိုသင်၏ဗီရိုထဲ၌ရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည် - နှုန်းထားများ
ဒါဟာနောက်တစ်နှစ်ရဲ့အချိန်ပဲ! ထိုအချိန်ကာလသည်သင်လိုချင်သောသူဖြစ်ဟန်ဆောင်ကာသင်လိုချင်သလောက်သကြားလုံးများစားနိုင်သည့်ရာသီ၏အလွန်ခက်ခဲသောအချိန်ဖြစ်သည်။ ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ ဒါပေမဲ့ဟယ်လိုဝိန်းပွဲမတိုင်ခင်မင်းကမင်းတို့နဲ့ဆင်နွှဲဖို့အတွက်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဝတ်စုံတစ်လုံးလိုလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူပွဲကျင်းပရန်စီစဉ်နေပြီးဝတ်စုံစိတ်ကူးတစ်ခုလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်ကူညီရန်ဤအရပ်၌ကျွန်ုပ်ရှိသည်။
ဟယ်လိုဝင်းကြေငြာချက်ကိုသေချာစေမည့် Pinterest ထံမှလွယ်ကူစွာပြန်လည်စုစည်းနိုင်သည့်အုပ်စုဝတ်စုံအကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အတူတကွစုစည်းထားပါသည်။
သငျသညျအစဉျအမွဲနေ့အဘို့တစ္ဆေမုဆိုးဖြစ်လိုခဲ့သလား ကောင်းပြီ၊ ဒီဟယ်လိုဝင်းကိုသင်လုပ်နိုင်ပါတယ် ဒီဖန်တီးမှုအသွင်အပြင်ကိုဖြည့်စွက်ရန်အတွက်သင်၏မျက်မှန်များ၊ ယူနီဖောင်းများနှင့်ဂီယာများကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။ Ghostbuster လိုဂိုကိုအလွယ်တကူပုံနှိပ်ထုတ်ယူနိုင်ပြီးအထုပ်ကိုဖန်တီးရန်အတွက်သင်၏ dorm အမှိုက်ပေါ်တွင်ကပ်ထားနိုင်သည်။
အဆိုပါ Barden Bellas
Bella's ထက်ဘာကောင်းလဲ? အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်သည် Pitch Perfect ၏ပရိသတ်တစ် ဦး အနေနှင့်ကြီးမားလွန်းပါကဤဝတ်စုံသည်သင်နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများအတွက်တုန်လှုပ်ချောက်ချားစရာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဒေါက်နှင့်သီချင်းများ (သင်လိုချင်ပါက) ကိုသိမ်းယူကာအကြောက်လွန်ဖွယ်ကောင်းသောဟယ်လိုဝိန်းပွဲကိုပိုင်ဆိုင်ပါ။
သင်၏ဖော်ရွေသောရပ်ကွက် Frat Bro ™
Ahhh အဆိုပါ frat ယောက်ျားလေးဝတ်စုံ။ တစ်နေ့တာအတွက် frat ကောင်လေးတစ်ယောက်၏ဖိနပ်ထဲမှာခြေလှမ်းဖို့အဆင်သင့်? ကောင်းပြီ, ယခုသင်၏အခွင့်အရေးပင်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကစားသမား၊ ရှပ်အင်္ကျီတစ်ချပ်နှင့်နေကာမျက်မှန်များကိုဆုပ်ကိုင်။ ဤဝတ်စုံစိတ်ကူးကိုလိုက်လျှောက်ပါ။
ဒီဝတ်စုံကဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းလဲ ပုံတူကူးရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်ပါ၊ သင်ရေးရန်သို့မဟုတ်အက္ခရာများကပ်ရန်သင်ဆန္ဒရှိသည့်ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်တီရှပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းမှာသူငယ်ချင်းအုပ်စုကြီးရှိပြီးပျော်စရာ၊ ဖန်တီးမှုတစ်ခုခုလိုချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီစိတ်ကူးကိုစမ်းကြည့်ပါ။ သို့သော် အကယ်၍ သင်စိတ်ထဲရှိထားပါကမတူညီသောရုပ်ရှင်မှဇာတ်ကောင်များအမြဲဖြစ်နိုင်သည်။
Hocus Pocus မှညီအစ်မ
ဟယ်လိုဝိန်း, ဒါကြောင့်သင် Hocus Pocus စောင့်ကြည့်ဖို့အချိန်ကိုသိ! ဒါဆိုမင်းရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုထုတ်ပြီးဒီအထင်ကရဟယ်လိုဝင်းရုပ်ရှင်ကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ ဒီဝတ်စုံဟာအလွှာတွေအများကြီးပါ ၀ င်ပါတယ်။
Dodgeball ရုပ်ရှင်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကထွက်ခဲ့ဖူးသော်လည်းဖြစ်နိုင်သည်မှာအလယ်အလတ်ဂျိုးကိုပြန်လည်ယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ယူနီဖောင်းတွေကိုမြန်မြန်ယူပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့ညတစ်ခုအတွက်ပြင်ဆင်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဝတ်စုံအတွက် Sharpie အနီရောင်သို့မဟုတ်ဆေးသုတ်အမှတ်အသားနှင့်အဝါရောင်ရှပ်အင်္ကျီဖြင့်ဒေသခံကိုယ်ပိုင်စတိုးဆိုင်တွင်ကောက်ယူနိုင်သည်။
နံနက်စာကလပ်မှာဘယ်လိုနေလဲသိလား။ ကောင်းပြီ, ယခုအန္တိမကစားသမားရည်မှန်းချက်များဝတ်စုံကိုဖန်တီးရန်သင့်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးအနေနှင့်၊ သင်၌ရှိနှင့်ပြီးသားသင့်ဝတ်စုံများအားလုံးသည်ဇာတ်ကောင်များဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သော ၀ တ်စုံသည်မမေ့နိုင်သောဟယ်လိုဝိန်းပွဲဖြစ်သည်။ ငါအဲဒီမှာဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။